Miady ny Ady Tsara: Mihantsy ilay Didim-panjakana Navoakan’i Trump Ireo Mpiaro ny Zon’ny Mpifindramonina · Global Voices teny Malagasy
Miady ny Ady Tsara: Mihantsy ilay Didim-panjakana Navoakan'i Trump Ireo Mpiaro ny Zon'ny Mpifindramonina
Voadika ny 02 Marsa 2017 17:02 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Italiano, Français, English
Mpanao hetsi-panoherana tamin'ny famoriambahoaka iray momba ny zo amin'ny fifindramonina, natao tao Washington, DC tamin'ny 2010. SARY: Nevele Otseog (CC BY 2.0)
Niditra tao Etazonia tamin'ny fampiasàna fahazoandàlana hitsidika, tamin'ny Janoary 2017 i Ali Kermani, teratany Iraniana monina any Danemarka. Mararin'ny homamiadana efa tena mamàka lalina (Stage III) ny rain'i Ali, ary, raha raisina anaty kajikajy ireo dingana ara-pitantanana mahazatra natao ho arahan'ireo teratany Iraniana, dia efa am-bolana marobe i Ali no tsy maintsy nanomana ny diany. Taorian'ny volana maro dia azony ny fahazoandàlana. “Saingy avy eo nilatsaka io didim-panjakàna io”, hoy i Ali, “ary dia tsy nomena alàlana intsony handray ny sidina aho”
Ilay “didy” resahana eto, mazava loatra, dia ilay Didim-panjakàna momba ny Fifindràmonina nosoniavin'ny filoha amerikàna Donald Trump tamin'ny 27 Janoary, didy niteraka onjan'ahiahy marobe, tahotra sy hatezerana, ary hatramin'ny fifangaroan-kevitra sy saritaka niely patrana, na izany teny anivon'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta, na ireo mpifindramonina, sy ireo mpikatroka mafàna fo ao Etazonia. Tampotampoka teo ny mpivahiny toa an'i Ali, izay efa nianatra sy niasa tao Etazonia nandritry ny enina taona ary tsy nody tany Iràna efa ho ampolo taona, dia niatrika fanarahana maso lalina, ary ankehitriny mety ho fandraràna mandritry ny fotoana lavabe, noho ny zompireneny fotsiny anefa. “Voaràra aho any Iràna satria tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra”, hoy i Ali, niteny somary naneso. “Ankehitriny aho voaràra tsy ho ao Etazonia, noho ny fitondràna ao Iràna.”
Hatramin'ny nanaovana sonia ilay Didy, ireo mpisolovava miaro ny Fifindràmonina, indrindra indrindra, dia niatrika fanamby sarotra vahàna amin'ny fanasiana dikany ilay lalàna toa kidaladàla ao anatin'ilay faritàny tsy fantatra / hafahafa, no sady miezaka ny manoro làlana ireo mpanjifany, ary na ry zareo tenany aza. Ny vokany dia anjara fanamby sy valim-pankasitrahana mitovy, raha tsy holazaina ny asa saina sy fihetsehampo mandreraka.
Koa satria efa voasonia ilay Didy, dia asa natrehan'ireo mpisolovava ny mamahavaha izay ho fiantraikan'ilay didy vaovao amin'ireo mpanjifany, hatramin'ny fandrafetana tetika mba hahafahan'ireo mpifindramonina miditra mora sy amim-pitoniana ao Etazonia. Teo ihany koa ny olana momba ny hoe lalàna araka ny maha-lalàna azy tokoa ve io , na araka ny lalàm-panorenana.
Ireo fanehoankevitra dia miainga avy any amin'ny saritaka sy tsy finoana ka tonga hatrany amin'ny hatezerana sy hasososrana. Zara raha nisy fampitandremana ny nanaovana soina ilay didim-panjakàna, ary na dia izay fomba kely indrindra ho fitarihana sy fanazavàna aza. Raha ny marina, na ny teny nentina nanao ilay didy aza dia efa nanafintohina be sy nanjavozavo raha jerena ny fomba mety hametrahana sy hampiharana azy.
Tsy dia atao mahagaga ny hoe nisy fisavoritahana teny amin'ireo masoivohom-panjakàna momba izay fomba tokony hametrahana azy io sy ny hoe iza no tokony hampiharana azy. Nandritra ireo andro vitsy voalohany nampiharana azy, betsaka ny tatitra avy amin'ireo Mponina Maharitra izay nolavina ny fahafahany miditra, nanery ny Trano Fotsy hivoaka hanazava ny toerana noraisiny hoe tsy niharan'ny fandraràna ireo manana ny Karatra Maitso (Green Card).
Iray monja amin'ireo endrika marobe isehoan'ny tsy fahatomombanan'ilay didim-panjakana io, izay tsy hoe fotsiny mampisaritaka ireo masoivohom-panjakàna sy ireo mpisolovava, fa tena naneho tsy fahalavorariana goavana avy amin'ny fitantanan-draharaha raha resaka fahafahany mandrafitra sy manatanteraka politika iray.
Nandritry ny tapabolana farany teo, nifamotoana niaraka tany anaty bilaogy, sehatra fifampiresahana sy velakevitra ifanaovana an-telefaona ireo mpisolovava niezaka ny hahatakatra marina izay zavamisy. Toa misy zavatra vaovao miseho foana isanandro. Isanandro misy fanamby vaovao sy fisalasalàna tonga, hoe fanambarana avy amin'ny USCIS no nilaza fa naaton-dry zareo ny fangatahana rehetra, isan'izany ny fangatahana fialokalofana, nofenoin'reo avy amin'iretsy firenena fito voaràra, na ny fametrahana fialàna nataon'ireo manampahefana ambony tao amin'ny Departemantam-panjakana sy ny CBP.
Nozarain'ireo mpisolovava nantsoina ho any amin'ny seranam-piaramanidina ny tantaran'ireo mpanjifan-dry zareo izay notazonina, naverina, nalaina am-bavany na naverina nody. Nozarain-dry zareo ihany koa ny amin'ireo seranana fidirana, ny torolàlana toy ny hoe inona no torohevitra tokony sy tsy tokony omena ny mpanjifa.
Nohamafisin'ireo onjam-panoherana sy firaisankina tany amin'ireo seranam-piaramanidina manerana ny firenena ny hatairana voalohany naterak'ilay didy. Nanome sehatra tonga lafatra hanehoana firaisankina teny anivon'ireo mpisolovava, mpikatroka mafàna fo ary mpandrindra vondrom-piarahamonina ilay didy manilikilika sy manavakavaka navoakan'i Trump.
Ny fanahin'ny firaisankina sy ny fifanampiana nivoaka avy amin'ireny toerana ireny no loharano nitondra aingam-panahy sy fanantenana ho an'ny maro. “Ny zavatra iray miabo hitako dia fony izaho nanolo-tena hiasa an-tsitrapo tao amin'ny seranam-piaramanidina tao Logan,” hoy i Joseph Molina Flynn, mpisolovava monina ao Boston ary nanokan-tena hiaro ny mpifindramonina. “Tsy hoe fotsiny nisy mpisolovava hafa mpiaro mpifindramonina tonga nanatrika teo, fa ny sasany tamin'ireo namako mpisolovava izay tsy misahana ny resaka fifindramonina ihany koa dia nampiato ny asany mba hitondra fanohanana sy fanampiana.” Iray amin'ireo mpisolovava marobe nandeha nankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenana ao Logan, Boston i Flynn. “Ny herinandro roa farany teo dia nahafahako nahita nivantana tsara mihitsy hoe fitaovana iray matanjaka ny lalàna, ary ny fiantraikany miabo avy amin'izany dia miankina amin'ny fomba ampiasàna azy,” hoy izy.
Ny marina dia mety hitàna anjara toerana lehibe manokana i Boston amin'ny tolona fanoherana ny maha-tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny ilay didy: ny Alahady 29 Janoary, roa ireo mpitsara federaly avy ao an-tanàna no namoaka fahazoandàlana vonjimaika nankahàtra ilay didy, voalohany tamin'ireo fanamby marobe hatrizay, natao araka ny lalàna hanoherana ilay didy. Ireo mpivahiny sasany, isan'ireny i Ali Kermani, samy niezaka ny handamina ny sidiny ho any Boston mba hisitraka tombony amin'ilay fahazoandàlana vonjimaika. “Fantatro fa nisy risika,” hoy i Ali, izay tamin'ny farany dia nosakanana tsy handray ny fiaramanidina hisidina ho any Boston, “saingy nihevitra aho fa raha nànana vintana iray hijery ny raiko, dia mendrika ny hitadiavako izay fomba rehetra izany.”
Voakasiky ny fifandrohizan'ny fisoloana vava araka ny lalàna sy ny asa tonga dia vavany eny an-kianja ihany koa ireo mpisolovava hafa tonga niasa an-tsitrapo teny amin'ny seranam-piaramanidina. “Tena fihetsehampo goavana sy nahatsapàna ho toy ny hoe nahazo fandresena iny. Tena nanao izay tratra ny tsirairay ary naniry daholo ny hanao zavatra,” hoy i Anna N. Yeghiasarian, mpisolovava misahana fifindràmonina, avy any Arlington, Virginia. “Tsapa ho tsara ery ny nahita ny olona tonga niaraka tanaty fotoana fohy avy any amin'ny lafivalon'ny firenena, ary avy any amin'ny faritra samihafa eto amin'ny firenena mihitsy aza, mba hifamory sy hanohana ilay tolona.”
Ny marina dia nifandamina sy namaly antso ireo mpisolovava araka ny lalàna, na teny an-kianja izany, na teny amin'ireo seranam-piaramanidina, ary nandray anjara tamin'ny famenoana ireo fitakiana niendrika fanamby atao amin'ilay didy. Ny 3 Febroary, ilay mpitsaran'ny Distrika any Seattle, ao Etazonia, James Robart, dia namoaka làlana miharo fepetra nibahana vonjimaika ilay Didy.
Ho an'ny tenako manokana, izay sady mpisolovava mpiaro mpifindramonina no Iraniana mipetraka eto Etazonia, ny fitazonako ny fanolorantenako, amin'ny fanomezana taridàlana madio araka ny lalàna ho an'ireo mpanjifa no sady manome antoka ho an'ny fianakaviako sy mitoetra ho mavitrika hatrany ao anatin'ny vondrom-piarahamoniko, no fanalahidy fototry ny fanambiko. Ny dadatoako sy ny ankohonany dia niomana ny hifindra monina aty Etazonia tany am-piandohan'ny Febroary. Nangatahako ho tonga aty haingana araka izay fahafahany ry zareo. 30 minitra monja talohan'ny nanaovana sonia ilay didy ry zareo no tafidina teto, ary dia tafiditra soa aman-tsara tsy dia nisy olana be manao ahoana tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena tao San Francisco. Saingy tsy nisy na iray aza taminay nahavita nisaina mialoha ny tahotra sy ny rarin-tsaina nanjo azy ireo nandritry ny diany sy ny fahatongavany teto Etazonia.
Fahiny ny ankohonako dia niampita ny sisintany maro toy ireo mpitsoaponenana, nisedra dia lavitr'ezaka nampijalijaly, mba hikaroka fiainana tsara kokoa. Tsy azoko an-tsaina velively hoe hitohy ao anatin'ny sehatry ny asako ny resaka fomban-drazana, ary aty Etazonia sy amin'ny toerana rehetra.
Ny lafiny tena mampahery amin'ireo tranga tamin'ny herinandro sy tapany lasa teo dia ny toedraharaha nisian'ny fanantenana sy ny firaisankina izay nipoitra avy any anatin'ny tahotra sy ny tebiteby. Ho ahy, fahalalàna mahery vaika ny hoe tsy miasa foana ho an'ny tombontsoan'ny manana fahefana ny lalàna. Mbola hitaky zavatra bebe kokoa amintsika izay misolo vava miaro ny fampidirana, ny fandeferana ary ny fahasamihafàna ireo taona efatra ho avy, saingy ho an'ireo mpisolovavan'ny fifindràmonina, farafaharatsiny, tonga izao ny fotoana tsara hihetsehana.